Ukuphindaphinda ngamanani edesimali Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Yonke imihla ngemisebenzi yethu yemihla ngemihla kufuneka sijongane neendlela ezahlukeneyo zamatyala, njengexabiso lesonka esikolweni, ixabiso letikiti lebhasi, ihempe entle esiyibonileyo evenkileni kwaye sifuna ukuyithenga, Ixabiso lamafutha kwisikhululo segesi, okanye kwaleyo mali uyityala umzala wakho ngaphezulu kwenyanga kwaye lixesha lokuba uhlawule.
Onke la maxabiso amelwe ngamanani iidesimali, kunye nokwazi ukuthenga, ukubuyisela utshintsho okanye ukujonga ukuba ulufumene ngokuchanekileyo utshintsho, kubalulekile ukuba wazi kwaye ufunde indlela yokuphatha imisebenzi kunye nawo onke la manani.
1 Yazi intsingiselo yamanani edesimali
2 Phindaphinda inani lokugqibela ngenani lendalo
3 Ukuphindaphinda kwenani lokugqibela ngenani lokugqibela
4 Ingcebiso ebalulekileyo: idesimali ngendalo kunye neshumi lokugqibela
Yazi intsingiselo yamanani edesimali
Amanani edesimali ngokusisiseko ngabo bane-comma. Ziqulathe inani elipheleleyo kunye nenxalenye yedesimali. Ukuyicacisa bhetele: amanani asekhohlo kwekoma abizwa ngenani elipheleleyo, kwaye lawo akwicala lasekunene emva kwekoma amele icandelo lokugqibela, njenge:
Phindaphinda inani lokugqibela ngenani lendalo
Kule meko yokuqala siyakwazi ukuphindaphinda kwamanani amanani ngenani lendalo. Jonga umzekelo: UBruna uthenge iipakeji ezine zecookies ezixabisa i-R $ 1,75 inye. Lixabise kangakanani ixabiso lokuthenga kwakho?
Kule meko, uBruna uchithe i-R $ 7,00. Inani leendawo zokugqibela zihlala zinjalo.
Ukuphindaphinda kwenani lokugqibela ngenani lokugqibela
Ngoku siza kwazi omnye umzekelo weemeko esihlala kuzo kubomi bethu bemihla ngemihla apho sinokufaka khona, ngeli xesha, ukuphindaphinda kwedesimali nge-decimal:
UHenrique waya kwivenkile yokuthengisa inyama wathenga i-1,5 kg yenyama yenkukhu. Ikhilo yenyama yenkukhu ixabisa i-R $ 7,80, ukuthengwa kukaHenrique kubiza malini?
Isiphumo senani leendawo zokugqibela zamanani amabini aphindaphindiweyo amisela inani leendawo zokugqibela kwimpendulo, kwaye kwimeko apho zero ilinani lokugqibela lenxalenye yedesimali, ayithathelwa ngqalelo, ishiya ixabiso lilonke UHenrique uthenge ixabiso le-R € 11,70.
Ingcebiso ebalulekileyo: idesimali ngendalo kunye neshumi lokugqibela
Ngethuba nje siphinda-phinda inani lokugqibela ngenani lendalo, indawo zokugqibela kwimpendulo ziyafana nenani eliphindaphindwayo. Kwimeko yokuphindaphinda idesimali ngedesimali, indawo zokugqibela kwimpendulo zizixa zokugqibela zeedigital zamanani amabini aphindaphindiweyo. .